Suudaan oo dib ugu yeeratay safiirkeedii Itoobiya iyo xiisada oo aan deganayn - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Suudaan oo dib ugu yeeratay safiirkeedii Itoobiya iyo xiisada oo aan deganayn
Suudaan ayaa sheegtay inay dib ugu yeertay safiirkeedii Itoobiya. War ka soo baxay wasaarada arimaha dibedda ayaa lagu sheegay in safiirkii u fadhiyay dalkaasi dinb loogu yeeray ayadoo lala samaynayo wadatashi.
Xiisada laba dhinac ayaa sii xumaatey kadib dagaal ka dhacay xuduudka aan jeexnayn ee labadaasi dal oo ay degan yihiin beeralay Itoobiyaana. Waxa Axmaarada halkaasi degan ay dagaal ku qaadeen qoomiyada Bishanguul oo Muslim u badan degana aaga biyo xidheenka.
Sanadkii hore ayaa labada dal uu dhexmaay dagaal aan badnayn kadib markii Itoobiya oo baacsanaysa Tigreega uu dagaalkii la galay xadka labada dal. Beeralayda deganaa aagaas ayaa intooda badan hadda ay ku dhacday bilaa dhul.
Dhinaca kale Tigreega ayaa sheegtay inay dileen askar badan oo ka tirsan ciidanka Itoobiya.